Masuuliyiinta Puntland oo siyaabo kala duwan uga hadley dilalkii Gaalkacyo ka dhacay – SBC
Masuuliyiinta Puntland oo siyaabo kala duwan uga hadley dilalkii Gaalkacyo ka dhacay
Gaalkacyo- Masuuliyiinta Puntland ayaa siyaabo kala duwan uga hadley weeraradii kala duwanaa ee ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee xarunta Gobolka Mudug, kuwaasi oo ay ku dhinteen 7 qof iyo dhaawaca tiro intaasi ka badan.
Wasiirka amniga Puntland Jeneral Yusuf Axmed Khayr oo saxaafada kula hadley magaalada Garoowe ayaa ku eedeeyey dilalka ka dhacay magaalada Gaalkacyo kuwa ay ka dambeeyey dad uu wasiirku ku sheegay inay yihiin argagixiso isla markaana ka soo horjeeda nabadaa oo cadow ku ah Puntland.
Yuusuf wuxuu si kulul u dhaleeceeyey dilkii qaarajinta ah ee qaraxa lagu dilay masuul ka tirsan Puntland oo ahaa Agaasimihii wasaarada Awqaafta & arimah Diinta Marxuum Sheekh Ismaaciil Xaashi Xuseen.
Wasiirku wuxuu xusey inay ay ciidamada Booliiska gobolku wadaan baaritaanka dadkii ka dambeeyey ama ku lugta lahaa dilkaasi, waxaana uu xaqiijiyey inay jiraan dad loo soo qabqabtey dilkaasi oo haatan baaritaan lagu.
Laakiin hadalka wasiirka ee eedeynta dillalkaasi mid ka duwan ayaa waxaa shaaciyey Madaxweyne kuxigeenka Puntland Cabdisamad Cali Shire isagoo ku eedeeyey falalka amni darada ee ka socda magaalada Gaalkacyo iyo waliba dilalkii ugu dambeeyey xoogaga Al-Shabaab sida uu sheegay Madaxweyne kuxigeenka.
Maalinimadii Sabtida ayaa qarax loo adeegsadey bamka gacanta laga hayo waxaa lagu diley agaasimihii wasaarada Awqaafta & Arimaha diinta Sheekh Ismaaciil Xaashi Xuseen iyo laba qof oo kale oo gaariga la saarnaa halka laba qof oo kalena uu dhaawac ka soo gaarey qaraxaasi.
Dilkaasi & dhaawacaasi dib maqribnimadii kooxo hubaysan ayaa kadib salaadii Makhrib gudaha u galay Masjidka Salaaxu-diin oo kamid ah masaajiida ku yaala magaalada Gaalkacyo,waxaana kooxdan rasaas aan loo aabo yeelin dadkii masjidka ku tukanayey iyadoo ay ku dhinteen falkaasi afar qof halka 7 kalena ay ku dhaawacmeen.
Saaka waaberigii salaada subax markii la tukanayey weerar kale oo lagu qaaday Masjika Faaruuq ee ku yaal xaafada Garsoor ee waqooyiga magaalada Gaalkacyo ayaa waxaa ku dhintey 1 qof halka sadex qof oo kalena ay ku dhaawacmeen.
Warar ayaa sheegaya in maleeshiyada masjidka weerartey ay wateen dad masaajidka ku tukanayey iyadoon la ogeyn tirada rasmiga ah.
Jawiga magaalada ayaa haatan kacsan waxaana laga dareemayaa waqooyiga magaalada Gaalkacyo xaalad cakiran oo dhanka amaanka ah, waxaana laga cabsi qabaa inay dhacaan falal kale oo amni xumo oo salka ku haya dilalkan & dhaawacyadan ka dacaya magaalada.
Waxan marka hore salamaya bahwaynta somaliyeed gaar ahana bulshda reer puntland.
Bacda salan waxan halkan uga tacsidaynaya dhaman Heladii iyo qarabadii ay ka geeryoodeen dhaman dadkii ku dhintay shalayto Magalada G/kacayo.
waxana aad iyo aad uga xumahay arintas waxana canbaaraynaya shuftadadii ka dilka iyo dhawaca ka gaysatay magalada Galkacayo.dadkuna waa in ay is xakameeyaan oo dul qad muujiyaan si arinkaa xal looga gaadho
Aad ayan uga xumaha dilalka qorshaysan ee lala begsanayo masuliyinta iyo waxgaradka puntland dowlada waxan kacodsanayna inay waxkaqabato amni darada gobolka kuso badanaysa
asc dhamaan waxaan salaamayaa bahda SBC ka dhib waxaan salaamayaa bulshaweynta reer puntland ee runtii nabada iyo xasiloonida wadankooda jecel…. marka xiga waxaan aad iyo aad uga xumahay dilalkii ka dhacay magaalada gaalkacyo ee loogu gaysty siyaasiyiin iyo dad rayid ah.. marka hore waan u tacsiyaynayaa eheladii iyo qaraabadii ay ka geeriyoodeen kuwa dhaawaca ahna ilaahay ha u sahlo caafimaad iyo dawo allaha siiyo kolle dee gacmo ka xaq daran baa dilay ilaahayna kuwaad ummada reer puntland haka qabto … dhamaan shacabka reer puntland waxaan ugu baaqayaa inay ka shaqeeyaan arrimahooda ayna la shaqeeyaan dowladooda ayna is ka qabtaan wixii cadow u ah ayaga iyo dalkooda …………………… aad baad umahadsantihiin
Marka hora Allaah (swt)ha u wada naxariisto dadkii dhintay oo dhanba.Salaam kabacdi waxaa la yaab leh oo ku cusub ardiga puntland dad lagu dilo Masjid dhexdiis iyo dibadiisba.Tan labaad ninmanka dadka caabidaya Ilaahood ku dhex dilay masaajidda qaarna ku dhaawacay waa dambiilayaal Rabbi (swt) ka galay dambi aad u weeyn.Mana aha dad wax ka yaqaan diinta Ilaahay (swt).Haddii ay in yar ka garanayaan diinta Islaamka saas ma ay fakareen jaahiliintu.
Sidaan qabo dhibaatada ka jirta Gaalkacyo waa labo midkood.Kan hore waxay ka jilicsan tahay dhanka dawladda Puntland.Tan labaad waxaa jira dad reer Gaalkacyo ah oo ayaguna dhankale ka miisaya waxa an la aqoon.Runtana Rabbi (swt) baa ogsoon.